Casharka 43 &44aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCW
#43 DUULLAANKII DII AMAR
Wardoonkii Madiina ayaa wuxuu soo gudbiyey in qabiilooyinka la kala yiraahdo banii Thaclaba iyo Muxaarib ay isu urursadeen sidii ay Madiina duullaan ugu soo qaadi lahaayeen. Rasuulku SCW markii uu arrintaa ka war helay wuxuu diyaariyey ciidan dhan Afar boqol iyo kontan nin, waxayna taariikhdu ahayd bishii Muxarram, sannadkii 3aad ee hijriga. Rasuulku SCW magaalada Madiina wuxuu madax uga dhigay Cusmaan ibnu Cafaan, dabadeedna ciidankii ayuu la baxay.
Dhex markii la sii marayo ayaa waxaa la qabtay nin u dhashay qabiilkii lagu socday ee reer banii Thaclaba, ninkaas, waxa uu ugu yeeray islaamka, isna waa aqbalay oo waa islaamay. Dabadeedna wuxuu horkacay ciidankii si uu u tuso fariisimaha uu cadowga daggan yahay.
Qabiilooyinkii markii ay maqleen soo bixitaanka Rasuulka SCW ayey ka carareen meeshii ay joogeen oo hawdka galeen.
Rasuulku SCW wuxuu tegey meeshii ay isku urursanayeen, wuxuuna degganaa halkaas bishii Safar oo dhan, si reer baadiyaha jihadaas deggan oo dhan u ogaadaan awoodda muslimiinta. Ka dibna Rasuulka SCW iyo ciidankiisii waxa ay ku soo laabteen Madiina.
#44 DUULLAANKII BAXRAAN
Bishii Rabbiicul Aakhir, sannadkii 3aad ee hijriga ayaa Rasuulka SCW iyo Saddex boqol oo nin oo uu hogaaminayo u bexeen meesha la yiraahdo Baxraan, oo Xijaas ka mid ah. Wuxuuna u baxay qureysh, meeshii ayuu tegey wuxuuna joogey intii ka dhimanayd bishii Rabbiicul Aakhir iyo bishii ku xigtey ee Jamaadul Uulaa, ka dibna Madiina ayuu ku soo laabtay isaga oo aan wax dagaal ah soo gelin.
Daabacad: 2003-01-04 | bog cusub: June 26, 2004